ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ - မှတ်စုစာအုပ်
မူလစာမျက်နှာ‎ > ‎ဗ‎ > ‎
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကျန်းမာရေးအရ ရုတ်တရက် အနားယူခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၂-ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ၁၉၃၃-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂-ရက်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြင်းစုကျေးရွာတွင် မွေးဖွားသည်။ စာတိုက်ဌာနတွင် အလုပ်စတင်ခဲ့၍ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းအမှတ်စဉ်(၉)ဗိုလ်သင်တန်းတက်ရောက်ကာ တပ်မတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်အတန်ကြာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနနှင့် ဗဟိုနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်း တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ၄င်းအချိန်တွင် အစိုးရ၏ စစ်တပ်သည် ကရင်သောင်းကျန်းသူများအား တိုက်ခိုက် နေသည့်ကာလ ဖြစ်သည်။
၁၉၆ဝ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြှင့် ခြင်းခံရသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု အား ဖြုတ်ချခဲ့သည့် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ရာထူးစဉ်လိုက် တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အနောက်တောင်တိုင်း တိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅-ခုနှစ်တွင် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့် ဒုတိယကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၆-ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ် ၁၉၈၇တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လမ်းစဉ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရခြင်း
၁၉၈၈ ခုနှစ် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခဲ့သည့် အရေးတော်ပုံကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် ၂၁ ဦးတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉တွင်န၀တအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်လာသည်။၁၉၉၂-ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြု ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင် ရုတ်တရက် အနားယူခဲ့ပြီး သူ၏နေရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက နဝတ ဥက္ကဌ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် အစားထိုး နေရာယူခဲ့သည်။
တပ်မတော်(ကြည်း)ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း၊ ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအပတ်စဉ် (၉)ဖြစ်ပြီး ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်မှာ B.C အမှတ် (ကြည်း - ၆၇၁၀) ဖြစ်သည်။
အမှတ်(၈၈)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ် တပ်မမှူး ( ၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၃ ထိ)
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသပါတီကော်မတီ ဥက္ကဌ ( ၁၉၈၃ မှ ၁၉၈၅ ထိ)
အနောက်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ( ၁၉၈၃ မှ ၁၉၈၅ ထိ)
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ( ၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၂ ထိ)
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးနှင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှာဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဖြစ်လာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင် ထံမှနိူင်ငံတော်အာဏာကို ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ ထပ်မံသိမ်းယူခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေသည် အစပိုင်းတွင် သူ၏ ရှေ့ကလူထက် ပိုမိုပျော့ပျောင်းသည့် သဘောကို ဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေး ကောက်ပွဲကို ချေမှုန်းလိုက်ပြီးကတည်းက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထားခြင်း ခံရသော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် [ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်] အား ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုများကို လျှော့ပေးပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလည်း လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တိုင်း ပြည်၏ တရားဝင်အင်္ဂလိပ်အမည် ဘားမားကို မြန်မာဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ.စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို အသစ် ရေးဆွဲစေခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေသည် စီးပွားရေးကို နိုင်ငံတော်က ထိန်းချုပ်မှုအချို့ ကို လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)သုိ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဝင်ရောက်ရေးအား လိုလားထက်သန်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး ခြစားမှုကို ကိုယ်တိုင်ကြီး ကြပ်တိုက်ဖျက်ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဝန်ကြီးအချို့ ကို အရေးယူခဲ့သည်။ ဝေဖန်ခြင်းကို လက်မခံသူဟု ရှုမြင်ကြသော်လည်း ကမ္ဘာ့ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ. (International Committee of the Red Cross) နှင့် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ. (Amnesty International ) တို့အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပြုခဲ့သည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေသည် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ဖြစ်သည့် ကရင်နှင့် ရှမ်းလူမျိုးများအား ဆက်လက်ဖိနှိပ်ခဲ့သည်။ မွတ်စလင်များ အား ဖိနှိပ်ခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ ခန့်မှန်း ခြေ လူ ၂၅ဝ,ဝဝဝ ခန့် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ပြေးဝင်ခဲ့ကြသည်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း ချုပ်ချယ်ပြီး စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ရေးသားသည့် စာနယ်ဇင်းသမားများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုပါ ကြီး ကြပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်က [ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား] လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ချုပ်နှောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးအား တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းအား လျှော့ချပေးခဲ့သော်လည်း သူ၏စီးပွား ရေးဆိုင်ရာမူများမှာ စနစ်ကျမူမရှိဟု ဝေဖန်ခံရလေ့ရှိသည်။ သူသည် ထင်ရှား ပေါ်လွင်စွာ မနေပေ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်း ပေါ်ရောက်ရှိရေးတွင် အဓိကအတားအဆီးအဖြစ် မြင်ကြသည်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ရုံးပိတ်ရက်နှင့် အခါကြီး နေ့ကြီးများတွင် သဝဏ်လွှာများ ရေးပို့လေ့ရှိပြီး သတင်ဌာနများအား တိုက်ရိုက် စကား ပြောခြင်း မရှိပေ။
သူသည် ခေါင်း ဆောင်ပြယုဂ်သာဖြစ်ပြီး မူဝါဒများကို ဝန်ကြီးများမှ ကိုင်တွယ်ထားသည်ဟု နှစ်ပေါင်းများစွာ ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မကြာမီကသတင်းများအရ သူသည် အာဏာကို စုစည်းလျက်ရှိပြီး တိုင်း ပြည်ကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားပြီဟု ဆိုကြသည်။ အနားယူရမည့် အသက် ၆ဝ ပြည့်သော်လည်း မနားဘဲ ဤရာထူးတွင် တစ်သက်လုံး နေသွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆနေကြသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အား ဖြုတ်ချသည့်ကိစ္စတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ရိုးစွပ်ခြင်းခံရပြီး ထိုကိစ္စအပြီးသူ၏အာဏာမှာ ပိုမိုခိုင်မြဲလာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေ၏ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မှာ ပအို့ဝ်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၄င်းဧ။်လက်ထက်(၁၉၉၂မှ၂၀၁၀)၁၈ နှစ်တာကာလတွင် ၄င်းဧ။် လက်ထက်တွင် သူဧ။် ဦးဆောင်မှု အဖြင် လမ်းများ တံတားများ ဆည်တာတမံများ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ အဆောက်အအုံများ၊စက်မှုဇုန်များကု တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အင်အားစုကို တိုးချဲ့ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။၄င်း အုပ်ချုပ်စဉ် ကာလအတွင်း အမျိုးသား ညီလာခံ ကျင်းပခြင်း၊ တောတွင်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ.အစည်းများကို ငြိမ်းချမ်းရေးရယူကာ တပ်မတော် အတွင်းသို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်တရားဝင် အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကျရောက်ခြင်းကြောင့် လူပေါင်းမြောက်များစွာ သေကြေပျက်စီး အိုးမဲ.အိမ်မဲ. ဖြစ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဧ။်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးစိုက်ရာမြို့တော်ကု ပျဉ်းမနားမြို့ အနီးတွင် နေပြည်တော်မြို့ တော် အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ ခြင်း၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေသစ်ကို ပြဌာန်းခြင်းနှင့် ၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။
ထွန်းနိုင်ရွှေ(ခ) ထွန်းထွန်းနိုင် (ဇနီး-ခင်သန္တာ)
ဦးကြိုင်ဆန်းရွှေ (ဇနီး -ခင်ဝင်းစိန် )
ခင်သန္တာရွှေ(ခ) မပေါက် (ခင်ပွန်း- ဇော်ဖြိုးဝင်း (ဗိုလ်မှူး))